အမှတ်(၆၅၃/၆၉၉)၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်ဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ho@gtbmm.com အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
Channel Banking Department ၏
၁။ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမ်ိတက် channel Banking Department အနေဖြင့် China UnionPay (CPU) Co.,Ltd ၏ နည်းပညာများနှင့်အတူ GTB-UPI Single Brand Credit Card ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စတင်ထုတ်ဝေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းကတ်များကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ POS များတွင် ငွေပေးချေခြင်းများကို ဆောင်ရွကိနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်ပနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ရှိ Hotel ၊ Supermarket ၊ လက်လီလက်ကားဆိုင်များတွင် POS ငွေပေးချေမှု့များကိုလည်းကောင်း၊ Online ငွေပေးချေမှု့များကိုလည်းကောင်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂။ Internet Banking/ Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းများကိုလည်း ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ အများပြည်သူများသို့ ဝန်ဆောင်မှု့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပီး ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ အသုံးပြူသူ Retail Customer (၃၅၄၈) ဦးနှင့် Corporate Customer (၂၄)ဦးရှိပြီး၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့် အချင်းချင်းငွေလွှဲပို့ခြင်း၊ စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသူများ၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်(NRC)ကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ငွေလွှဲပို့ခြင်း၊ ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်တင်းခြင်း၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသူများ၏ လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် Transaction Detail စစ်ဆေးခြင်းစသော ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု့များကို ၂၄/၇ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
၃။ ယခုအခါတွင် ကတ် In-house ထုတ်ဝေခြင်းကို Channel Banking ဠာနတွင်း ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်အနေဖြင့် Credit Card ထုတ်ဝေခြင်းသာမက Debit Card ဝန်ဆောင်မှု့များကိုပါ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ယင်းနောက် Card Acquiring လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု့အနေဖြင့် ATM နှင့် POS ဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းများ၊ Quick Response (QR) Payment ဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မိုဘိုင်းလ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်း GTB Pay အားဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
Card Bussiness Of Global Treasure Bank
It is of great important to apply technology for the development of banking services.GTB has signed contract agreement with Union Pay International (UPI) and China Union Pay Data (CUPD)for Card Management Service to carry out Card Business.CUPD will serve asaCMS Outsourcing Service provider and GTB will issue MPU-UPI Co-branded Credit Cards.In order to modernization and in harmony with international banking standards GTB assigned KPMG advisory service private limited for the screening of suitable and international standard core banking system. GTB has signed an agreement with Infosys Core Banking Co.,Ltd for establishment of Core Banking System and at the same time DATA Center also being established.
GTB ဘဏ်၏ Mobile Banking ၀န်ဆောင်မှု့သင်တန်း
GTB ဘဏ်၏ နှစ်သစ်အန္တာရာယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်ရွတ်ဖတ်နာကြားခြင်း